Zvibereko ASIC Chips kubva Samsung - Blockchain News
Ndira 31, 2018 arun
Zvibereko ASIC Chips kubva Samsung
Samsung akatanga kubudisa ASIC Chips nokuda remigodhi cryptocurrency
The chikuru mukwikwidzi wekambani pamusika uyu anowana pamusoro midziyo mugodhi kusvika $ 400 mamiriyoni ari muzvina.
South Korean Samsung rave mubasa pagadzirwe ASIC Chips, izvo kushandiswa pakugadzira BitCoins, ethers nezvimwe cryptocurrencies. Izvi zvakanyorwa TechCrunch achitaura mumiririri wekambani.
Samsung zvino mubishi kugadzira Chips kuti thecryptocurrency. zvisinei, we can not give more details about our customers. – Samsung PressOffice
The wekutanga basa Samsung pamusoro Chips nokuda miners akaudzwa nokuda Korean nevezvenhau. Maererano yomunharaunda pakadhindwa The Bell, vanobudisa kugadzirwa ASIC Chips muna Samsung semiconductor chirimwa kwakatanga muna January 2018. Sources vanoti dzesangano akatotanga vakabvumirana nerubatsiro michina kuchera ive yazvakaitikira kambani kubva China.
Mumiririri Samsung akaramba kukurukura TechCrunch nezvokuzadziswa basa ASIC Chips.
Bhuku rinotaura kuti Samsung ane kukwikwidzana pamwe Taiwanese microchip mugadziri TSMC, iyo anowana pamusoro zvokushandisa kuchera kubva $ 350 mamiriyoni $ 400 miriyoni nokuti kota. The kambani anoshumira bhizimisi dzakadaro mikuru midziyo kuchera sezvo Bitmain naKenani Creative.
Zvichitevera migumisiro 2017, Samsung akava kupfuura Chip mugadziri, displacing kubva nzvimbo mutungamiri Intel. Bhizimisi Samsung ari microchip kurimwa munzvimbo 2017 aiva $ 69 bhiriyoni zvichienzaniswa Intel raMwari $ 62.8 bhiriyoni.
Canada yokutanga Blockchain ETF anotendwa regulators
The Ontario Securiti ...
Blockchain chirongwa DFINITY Stiftung anomutsa $ 61M
A asiri mubereko organiz ...
Binance to launch Si...
Previous Post:Sei vanoitisa ICO kuSwitzerland
Next Post:Mastercard raMwari CFO: Cryptocurrency kutenga vari boosting redu mutengi mari